Ku isticmaal wakiil wakiil Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce iyo kuwa la mid ah | Laga soo bilaabo Linux
Qaabka aan hoos ku qeexayo waxaa lagu helay tarjumida maqaal Spanish ah on Arch Wiki isticmaalka a Wakiil. Habkani waa inuu noqdaa mid si sax ah u ansaxinaya qaybinta kale.
Meelaha Desktop sida Xfce o Lxde la'aanta wax codsi ah oo u oggolaanaya iyaga inay ku maareeyaan isticmaalka Global Proxy ee Nidaamka, habka aan ugu dhex shaqeyn karno Gnome o KDE.
Barnaamijyada qaar (sida wget) waxay isticmaalaan doorsoomayaasha deegaanka ee qaabka "protocol_proxy" si loo go'aamiyo matalaadda borotokool cayiman (tusaale ahaan, HTTP, FTP, ...).
Halkan waxaa ah tusaale ku saabsan sida loo qaabeeyo doorsoomayaashan:
Haddii aan dooneyno inaan ka dhigno doorsoomayaasha deegaanka wakiillada aan soo sheegnay inay heli karaan dhammaan isticmaaleyaasha, waxaan ku dari karnaa qoraalka, tusaale ahaan "Proxy.sh"gudaha /etc/profile.d/. Qoraalka waa inuu lahaadaa rukhsad.
Haddii kale, waad otomatayn kartaa beddelidda doorsoomayaasha adoo ku dari kara feyl faylkaaga .bashrc sida soo socota:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ku isticmaal wakiil wakiil Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce iyo wixii la mid ah
runta waligay wakiil uma isticmaalin maxay tahay?
Hagaag ... Wakiilku wuxuu leeyahay adeegsiyo badan. Wakiil wuxuu u adeegaa inuu kala dhexgalo isku xirnaanta shabakada ee macmiilku u sameeyo serverka u socda. Maxaa jira, sidaan sheegayay, waxay leedahay adeegsiyo badan. Aan aragno sida aan kuugu sharixi karo qaab fudud:
a) Aynu nidhaahno kombuyuutarka shirkaddaada waxaad ku dhex maraysaa wakiil. Haddii ay leedahay hawsha kaydka oo aad ka soo gasho, tusaale ahaan, Linux.net, dhammaan macluumaadka aad hesho waxaa lagu keydin doonaa keydkiisa. Marka markaad markale gasho waqti kale, marin u helka ayaa yara yara dhaqso badan maxaa yeelay waxaad kuheli doontaa shey qaar kayd ahaan.
b) Aynu nidhaahno waxaad ku xirmaysaa kombuyuutarka shirkaddaada oo waxaad dooneysaa inaad gasho desdelinux.net. Markaad tagto si aad u daalacato kombuyuutarkaas, wuxuu codsi u gudbiyaa Wakiilka Wakiilka ee shirkaddaada iyadoo la raacayo xaddidaadaha aad haysato, adeegaan wuxuu codsigaaga u dirayaa internetka ama uu diidayaa.
Kuwani waa laba kiis oo caadi ah. Server wakiil ayaa noqon kara wax ama aad u fiican, ama aad u xun (sida kiiskeyga).
Wixii macluumaad dheeraad ah eeg xidhiidhkan
Oo waliba waxay ka shaqeysaa in laga gudbo miirayaasha, yaanan ilaawin
Taasi waa nooc kale oo wakiil ah 🙂
Waxaan rabay inaan weydiiyo qoraaga haddii, weligiis ma wadaagay xiriir internet ah oo loo maro PAN (bluetooth)? Waxaan ku sameeyay guushii 7 iyo XP, ee aan ku lahaa xiriirka, waxaan kor u qaaday wakiil (perProxy lagu sameeyay java) iyo mashiinka kale iyada oo loo marayo PAN, waxaan ku qaabeeyey Firefox IP iyo dekedda. Markii aan u wareegay Linux, mar dambe ma aan aqoonin sida loo sameeyo PAN inta u dhexeysa mashiinnada.
Anigu waxaan ahay qof isticmaala Lubuntu oo faraxsan waxaanan la kulmay dhibaatada aan u isticmaalo isku-xidhka iskuulkayga (wakiil ahaan) maalin kasta iyo isku xidhka gurigayga sidoo kale (wakiil la'aan). Sidaa darteed, haddii aan u habeeyo wakiil-ballaadhan nidaamka, waa inaan galiyaa oo iska fogeeyaa iyadoo kuxiran hadday jaamacad tahay iyo in kale.
Ma jirtaa waddo si otomaatig ah loo socodsiinayo hawshan si ay ugu tiirsan tahay shabakadda Wi-Fi ee aad ku xidho, waa la hawlgelin karaa ama maya?
Waad salaaman tihiin galab wanaagsan good
Sidee ayey tahay inaad u dejineysid wakiilka nidaamkaaga? Maxaa amar ah?
Waxaan barnaamij ka sameyn karay qoraal lagu ogaanayo Wifi-ga aad ku xiran tahay, iyadoo ku xiran hadba kan ay tahay ... isticmaal wakiil ama mid kale.
Salaan iyo soo dhaweyn.
Dhammaantiin waad salaaman tihiin! Waxaan la shaqeynayay LXDE in muddo ah iyo, arrin la mid ah tii Ariel, waxaa igu qasbay inaan habeeyo wakiil si aan ugu xirnaado internetka.
Waxaan marayay dukumiintiyada AskUbuntu waxaanan la kulmay qof weydiiyay wax la mid ah jawaabtuna waxay ahayd mid wax tar leh! Waxaan iskaga tagayaa xariirka hadiiba uu qof daneynayo inuu fiiriyo: http://askubuntu.com/q/175172/260592
Ugu dambeyntiina, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii KZKG ^ Gaara ay barnaamij ka sameysay qoraalka ogaanaya Wifi isla markaana beddelaya wakiillada iyadoo ku xiran shabakadda ... Runta ayaa waxtar weyn yeelan lahayd haddii aan go'aansado inaan la wadaago.
Waa salaaman tahay, waxaan isticmaalaa qalabka loo yaqaan 'slackware 14.1' waxaanan sameeyay qaybtii saxda ahayd ee qoraalka, wixii aanan ka helin nidaamkayga ayaa ahaa faylka .bashrc
Ku jawaab sLaCKeR
Maqaalkani waa xoogaa duug ah, laakiin wali waan kugu soo qori doonaa maxaa yeelay waxay umuuqataa inay tahay waxa ugu dhaw dhibaatada MY.
Maxaan sameeyaa marka isticmaalahaygu haysto foomka USER @ COMPANY? Hadaad dhug yeelato; Laba arbaas ayaa isla safka ku sii jiri doona!
Windows waa mid aad ufudud, laakiin GNU / Linux sidoo kale